ဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအပြားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်တရားစီရင်မှုမှာတွေ့ရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ (IBC) ဆင်တူသည်။ သို့သော်ဆာမိုအာရဲ့ဥပဒေတွေကတခြားအခွန်ဟေဗန်အတွက်မသိမမြင်ရတိကျတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း features တွေပေး။
နောက်ကျော 1987 အတွက်, ဆာမိုအာအထူးသသည်၎င်း၏နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ (IC) အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းပေးမယ့်ဥပဒေသစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဤပညတ်တရားကို 1987 ၏ဆာမိုအာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (ပြင်ဆင် 2009) ဟုခေါ်သည်။ ဤပညတ်တရား၏အဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို "သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်" တစ်ခုအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ၏ရှယ်ယာရှင်အခြားသူတစ်ဦးအတွက်အပ်နှင်းသူ / သူမ၏ရှယ်ယာများကိုရှိသည်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျဖြစ်ပေါ်သည့်အခါကဤသို့ဖော်ပြသည်ဘယ်မှာပုဒ်မ 228B တွေ့ရပါသည်။ ပညတ္တိကျမ်းတစ်ခုအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများဒီ option ကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ရပ်များအဘယ်အမျိုးအစားများကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းကို "သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်" ပါဝငျနိုငျကွောငျးကိုဤသို့ဆို၏
•မဆိုနိုင်ငံခြားအစိုးရတစ်ခုခုကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ (ရှယ်ယာရှင်ရဲ့) အကျိုးစီးပွား expropriating ။
ဤပညတ်တရား၏ဂုဏ်အသရေအထက်ဖော်ပြပါ "သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်"a"ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်" ဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသာဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါသည် ပညတ္တိကျမ်းကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများတတိယပါတီမှသူ / သူမ၏အကျိုးစီးပွားလွှဲပြောင်းရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးခွင့်ပြုခြင်း "ဆို" ဖြစ်ရပ်များကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကြောင်းတိကျသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ, ပညတ္တိကျမ်းကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်အမည်ရှိတတိယပါတီ (သို့မဟုတ်ပါတီများ) တွင် "အလိုအလြောကျအင်္ကျီ" ကိုအဖွဲ့ဝင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းကိုလည်း "(မူရင်းပိုင်ရှင်အပါအဝင်) မျှသည်အခြားလူတစ်ဦးက" သစ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များက '' အကျိုးစီးပွားမှမဆိုအခွင့်အရေးရှိသည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏။
အဘယ်အရာကိုဆိုလိုတစ်ခု IC ဆာမိုအာဖွဲ့စည်းသောအခါကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများအဖွဲ့ဝင်များ '(ရှယ်ယာရှင်များ') အခွင့်အရေးကိုအလိုအလျှောက်အမည်ရှိတတိယပါတီများမှလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်ရှိရာ "သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ရပ်များ" ၏ရှည်လျားသောစာရင်းထည့်သွင်းရန်စာဖြင့်ရေးသားနိုင်သည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ဖက်စပ်၏အဖွဲ့ဟာတစ်အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုပုံစံတင်ပို့ရန်တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစီရင်ပုံစံတင်ပို့ရန်ပါဝင်နိုင်ပါသည်; တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်များသို့မဟုတ်သိမ်းယူမှု၏အစိုးရအသိပေးစာ။ အဆိုပါစာရင်းတွင်နှင့်ပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်အပြင်, တစ်ဦး IC တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဆာမိုအာတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိဟာဝိုင်ယီနှင့်နယူးဇီလန်အကြားလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တည်ရှိသည်တစ်ဝက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည့်အခါနယူးဇီလန် 1914 ထံမှ 1962 မှဆာမိုအာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ ဆာမိုအာကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံများအသင်းဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများ Samoan အဘိဓါန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆာမိုအာဗြိတိသျှဘုံတရားဥပဒေစနစ်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ OECD ၏သို့မဟုတ် FATF ကနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားဖူး။ တစ်လုံလုံခြုံခြုံစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေးနေချိန်မှာအစိုးရကငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• ပိုင်ဆိုင် 100% နိုင်ငံခြားရေးဖြစ်ရမည်: သာနိုင်ငံခြားသားများအနေနဲ့ IC ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
• ခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: ဆာမိုအာသည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများတစ်ဦးရှိပါတယ်။
• လုံးဝအခွန်အခမဲ့: IC ရဲ့အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အာဏာပိုင်များထံလုပျဆောငျရမညျအဖြစ်သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်း IRS ကိုအားလုံးဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: မည်သူမဆိုမိမိတို့၏အမည်များနှင့်အခြား IC အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်ရန်အဘို့အသာအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွင်းမပါဝင်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များဖြစ်ကြသည်, တကရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာနောက်ထပ် privacy ကိုများအတွက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
• အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အခကြေးငွေများ: မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးအလွန်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• စာရင်းစစ်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုအဘယ်သူမျှမ: အဘယ်သူမျှမဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်နှင့်မျှမတို့မဖြစ်မနေစာရင်းစစ်နေကြသည်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်မြို့တော်: အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အရင်းအနှီးရှိပါတယ်။ Authorized ရှယ်ယာမြို့တော်မှသာ $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမတောင်းဆိုနေတဲ့အစည်းအဝေးများ: နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။
ဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) အမည်
တစ်ခုကအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီအမည်အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုတူမပြုရပါ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကိုတရုတ်ဇာတ်ကောင်အပါအဝင်မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပြုထားကုမ္ပဏီအမည်ကို၏ခွင့်ပြုချက် International နှင့်နိုင်ငံခြားရေးကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်မှရရှိသောရမည်ဖြစ်သည်။ အမည်များကိုသုံးလကာလအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "IC" ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ။
သစ်တစ်ခု IC မှတ်ပုံတင်လွယ်ကူပါတယ်။ ရုံထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကာစာချွန်လွှာ၏ကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများ file နှင့်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်။
အဆိုပါစံမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး $ 300 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အထူးလျှော့စျေးအောက်ပါလျှောစကေးအပေါ်ကြိုတင်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်:
5 နှစ်ပေါင်း $ 1,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ;
10 နှစ်ပေါင်း $ 1,500 အမေရိကန်ဒေါ်လာ; နှင့်
20 နှစ်ပေါင်း $ 2,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
1987 ၏နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (ပြင်ဆင် 2009) ထုတ်ဖော်ခံရခြင်းမှရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ မည်သူမဆိုရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်အဘို့အဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး IC အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်များလူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာ, preference ကိုရှယ်ယာတန်းတူတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်လုံးဝမတန်းတူတန်ဖိုးရှယ်ယာမဲပေးသို့မဟုတ်လုံးဝမမဲပေးအခွင့်အရေး, ရှေးနုရှယ်ယာနှင့်လျှော့ရှယ်ယာနှင့်အတူရှယ်ယာအားလုံးခွင့်ပြုထားပါသည်။
ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များ, အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုလည်းထပ်မံ privacy ကိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ သို့သော်ရှယ်ယာမြို့တော်အခွင့်အာဏာအနည်းဆုံးမှတ်ပုံတင်သည့်အခါဖွင့်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည့် $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ အဆိုပါဒါရိုက်တာများမဆိုတိုင်းပြည်ကနေဖြစ်နိုင်ပြီးဆာမိုအာနေထိုင်ရန်မလိုပါ။ ဒါရိုက်တာကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆာမိုအာအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများနှင့်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏အစားအဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ တလိုင်စင်ရဂေါပကကုမ္ပဏီဖြစ်ရပါမည်ဖြစ်စေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးကဂေါပကကုမ္ပဏီ၏ရုံးခန်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်အပြင်လူအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဆကျဆံ။
: IC ဆာမိုအာရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချမဟုတ်နှင့်ဒေသခံနေထိုင်သူများကပိုင်ဆိုင်မအပါအဝင်မည်သည့်အခွန်အခများပေးဆောင်ပါဘူး
• Capital ကိုလာဘ်အခွန်
သို့သော်အမေရိကန်တွေကသူတို့အစိုးရရဲ့ဝင်ငွေအေဂျင်စီများမှ (အခြားမည်သူမဆိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နှင့်အတူ) သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးသတင်းပို့ရမည်။
အစိုးရအစာရင်းကိုင်, စာရင်းအင်းမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားခြင်းကိုလိုအပ်သည်။ သို့သော်အစိုးရနှင့်အတူစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ရန်မလိုအပျခရှိသေး၏။ စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများအများပြည်သူရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒါဟာတစ်ဦး IC မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရက်တဦးတည်းအနေဖြင့်ယူလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
တစ်ဦးကဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: 100% ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံခြားငွေ, ခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ, တင်းကျပ်သော privacy ကို, ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာမျှအခွန်, အနိမ့်မှတ်ပုံတင် / သက်တမ်းတိုးကြေးမရှိ, စာရင်းစစ်မရှိဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများပုံစံတင်ပို့ရန်, တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ရန်လိုအပ် အဘယ်သူသည်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာမျှလိုအပ်တဲ့ယေဘုယျအစညျးအဝေးမြား, အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါနိမ့်ဆုံးမြို့တော်ရှိနိုင်ပါသည်, အင်္ဂလိပ်ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။